फेरि एकाएक चर्चामा आइन रश्मी देसाई! के भन्छन् त फ्यान ? हट तस्विरहरू हेर्नुहाेस् – ramechhapkhabar.com
फेरि एकाएक चर्चामा आइन रश्मी देसाई! के भन्छन् त फ्यान ? हट तस्विरहरू हेर्नुहाेस्
यसअघि पनि बेला बेलामा उनी पहिरनका कारण चर्चामा आइरहेकी थिइन् । रश्मीले उत्तरन, दिल से दिल तक, नागिन ४ जस्ता चर्चित सिरियलमा काम गरेकी छिन् भने बिगबोस सिजन १३ मा पनि उनी सहभागी भएकी थिइन् । बिगबोस पछि उनको चर्चा थप चुलिएको थियो ।